अरुलाई पानी छ्याप्दै सडकमा कुद्नेहरु - Saptakoshionline
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १७, २०७५ समय: ७:११:३६
कृष्ण जुनेली, तपाई आफनै शुरमा यात्रामा हुनु हुन्छ तर कसैले विच बाटोमा पुगेको समयमा एक्कासी पानी छ्यापी दियो भने कस्तो लाग्छ ? अझ कार्यालय तथा विशेष काममा चिटिक्क परेर हिडी रहेको समयमा यसरी नै बाटोमा कसैले पानी छ्यापी दिदा कस्तो लाग्छ ? रिस उठ्््छ होला । मलाई पनि आज यस्तै भएको छ त्यसैले पानी छ्याप्नेहरुलाई हेर्नु पर्नेहरुलाई धेरै ननिदाउन सुझाव दिन केही शव्द कोर्न लागेको हुँ ।
म दैनिक २० किलो मिटर यात्रातय गर्दै कार्यालय आउने गर्दछु । त्यसै गरी मोटरसाईकलमा कार्यालयबाट फर्कनु मेरो दिनचर्या हो । आज पनि म इनरुवाबाट इटहरी तर्फ कार्यालय आउन मैले चड्ने त्यही पुरानो मोटरसाईकलमा यात्रा गरि रहेको थिए तर इनरुवाबाट इटहरी सम्म आइपुग्दा मलाई छ ठाँउमा पानी छ्यापीयो । बाटामा आफनै शुरमा यात्रा गरिरहेको मलाई खोलाको पानी एक्कासी छ्याप्दा उठ्न सम्म रिस उठ्यो , पानी छ्याप्नेलाई रोकेर किन त्यसो गरेको सोध्ने प्रयास गरे । त्यो पनि अत्याधिक गतिमा कुदाईने गरेको आरोप खेप्दै आएको ट्रिपर चालकले मेरो कुरा के सुन्थयो र ! उ धेरै अगाडि पुगी सकेको थियो । यही क्रम इनरुवाबाट इटहरी सम्म आइपुग्दा छ पटक सम्म भयो । हुन त आज मात्र हैन अरु दिन पनि यी पानी छयाप्नेहरुको पिडा यदाकता खेप्दै आएको छु मैले । मैले खेपेको यो पिडा पक्कै पनि अरुले पनि खेप्नु परिरहेको छ भन्ने लागेर नै सचेतनाका लागि समेत केही शव्द खर्चन लागेको हुँ ।
राजमार्गमा पानी सहितको गिटी र वालुवा बाकेर कुद्ने सवारी साधनहरुले यसरीले सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई दुःख दिइरहेका छन । एका तर्फ पानी चुहाउदै गिटी र वालुवा बोक्नेहरुले यसरी वोक्दा औजन समेत वढी हुने गर्दछ भने अर्काे तर्फ मोटरसाईकल र साइकल चालकहरुको आँखामा पानी पर्दा दुर्घटना समेत हुने सम्भावना हुन्छ तर पनि सरोकारवाला निकायको चाँसो त्यस तर्फ किन पुग्दैन ? कि यस्ता सवारी साधान मालिकहरुले झै अरुलाई पानी छ्याप्दै आम्दानी गर्ने गरे जस्तै फाइदा लिइ रहेका छन ? सडक क्षेत्रमा सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी समाल्ने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरु भने दैनिक देखिने यस्ता दृष्यहरु किन देख्दैन ? अवथा उनीहरु कुम्वकर्ण नै हुन जति वेला पनि निदाइरहने ? सडकमा यात्रा गर्नेहरुलाई पिडा दिने यस्ता सवारीहरुलाई नियमन गर्ने निकायहरु कहाँ छन मेरो यो प्रश्न कस्ले सुन्ने ? अनि कस्ले मलाई र म जस्तै पिडितलाई जवाफ दिने ?